Lemon တစ်မျိုးတည်းနဲ့ စွယ်စုံသုံးကြမယ်
24 Jul 2018 . 3:15 PM
Lemon ကို လူအများစုက အမူးအမော်ပြေဖို့ ဖျော်သောက်တတ်ကြသလို ဟင်းအမယ်တွေမှာ အချဉ်ဓာတ်ရရှိဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် က အချဉ်ဓာတ်အပြင် လူတွေထင်ထားတာထက်ကို အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရှိပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါက်ို ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင် မျက်နှာပေါ်ရှိ အမာရွတ်တွေပါပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်တဲ့အထိ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကသာမက အလှအပရေးရာအထိပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အလွန်ပေါများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးလည်းမကြီးသလို အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့ Lemon ကိုသုံးပြီး အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတတိုးစေဖို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Lemon မှာ ကင်ဆာကိုဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေများစွာရှိပါတယ်
တခြားသော လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးတွေလို Lemon မှာလည်း ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ချဉ်တဲ့အရသာရှိတဲ့ အသီးတွေနဲ့ အဲ့အသီးတွေကနေ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အဆီတွေက ကင်ဆာရောဂါကို တားဆီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ Lemon ဖျော်ရည်က သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဖျားနာစေနိုင်တဲ့ ဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Lemon မှာ ဗီတာမင်စီ၊ ကယ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ မဂ္ဂင်နီဆီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ Lemon မှာပါဝင်တဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ဒြပ်ပေါင်းက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် Lemon က သားမြတ်ကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ တခြားသောကင်ဆာရောဂါတွေ မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့လည်း လေ့လာမှုတွေအရ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Lemon က အကောင်းဆုံး သဘာဝကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရေး မီးဖိုချောင်သုံးဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Lemons have anti cancer properties.
Lemon သုံးပြီး အရေးအကြောင်းတွေကို သဘာဝအတိုင်းဖယ်ရှားမယ်
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလို့ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကို ဟန့်တားလို့မရပေမယ့်လည်း Lemon သုံးပြီး အရေးအကြောင်းတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်နဲ့ မျက်နှာအရေပြားကို သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ Lemon အဆီအနှစ်က မျက်နှာအရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်တွေပျက်စီးမှု လျော့ကျသွားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကောလဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပြီး အရေပြားရဲ့ ကျုံနိုင်ဆန့််နိုင်စွမ်းအားကိုလည်း နဂိုတိုင်းပြန်ဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Lemon ဖျော်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝ Enzyme ဓာတ်က အရေပြားရှိ ချွေးပေါက်ကျယ်နေတာကို ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းတွေ ပြန်လည်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ Lemon ကွင်းလေးတွေကို အရေးကြောင်းတွေဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာပေါ် မိနစ်အနည်းငယ်တင်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) Lemon ကို အခွံခွာပြီး ခြစ်ကာ ကပ်ပေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုလေး ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ပတ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကလေးအသားအရေလေးလို နူးညံ့လာတာကို အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remove wrinkles naturally with lemon.
ဝိတ်ကျဖို့ Lemon ဖျော်ရည်သောက်ပါ
ဗီတာမင်စီမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အခါ ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိတဲ့ အလွန်အမင်းစားချင်စိတ်ဖြစ်စေသော Cortisiol level လျော့နည်းစွာ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခြားသော Calories နဲ့ သကြားဓာတ်တွေ မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့ ကော်ဖီနဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို သောက်သုံးမယ့်အစား Lemon ကို အကွင်းကွင်းလေးတွေလှီးပြီး ရေထဲမှာစိမ်ကာ သောက်ခြင်းဖြင့် ကယ်လိုရီတွေ ကျဆင်းစေပါတယ်။ 330ml ရှိတဲ့ CoCa-Cola သံဘူးမှာဆိုရင် Calories 140 ပါဝင်ပြီး ပန်းသီးဖျော်ရည် 100ml မှာဆိုရင် 46 Calories ပါဝင်ကာ Lemon စိမ်ထားတဲ့ အရည်မှာဆိုရင်တော့ Calories ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဝ်ိတ်ကျချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြားဖျော်ရည်တွေသောက်သုံးမယ့်အစား အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ Lemon ဖျော်ရည်ကိုသာ သောက်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Lemon ဖျော်ရည်က အသည်းအဆိပ်အတောက်ပြေစေနိုင်တယ်
Lemon ဖျော်ရည်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အဆိပ်အတောက်တွေပြေစေပြီး အစာချေဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ Lemon မှာပါဝင်တဲ့ Pectin ဓာတ်က အဆီတွေကို ချွဲပျစ်စေပြီး အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Lecithin ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Choline နဲ့ အချဉ်ဓာတ်မှာပါဝင်တဲ့ အဆီဟာ အသည်းထဲမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးရမှာ ပိုမိုထိရောက်စေပါတယ်။ ဒီလို အကျိုးအာနိသင်များပြီး အချဉ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ Lemon ကို အသည်းအဆိပ်အတောက်တွေပြေစေဖို့ အိမ်မှာ ဒီလိုလေးပြုလုပ်ပြီး သောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကတော့ Lemon တစ်လုံး၊ ရေခွက်တစ်ဝက်၊Lecithin စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း(သို့) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ အုန်းဆီနှစ်ဇွန်းမှသုံးဇွန်း(သို့) သံလွင်ဆီနှစ်ဇွန်းမှသုံးဇွန်း၊ ဗီတာမင်အီးတစ်တောင့်နဲ့ လတ်ဆက်တဲ့ဂျင်းတစ်တောင့် တို့ကိုရောပြီး တစ်မိနစ်ခန့်ထားပေးပါ။ ရလာတဲ့အရောအနှောကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားပေးပြီး နောက်နေ့မှာ သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီအရောအနှောကိုသောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ထမင်းမစားခင် ဇွန်းတစ်ဝက်ခန့်သောက်သုံးပေးတာက ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Lemon သုံးပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကူးစက်ရောဂါကို ကုသလို့ရပါတယ်
Lemon မှာ စွမ်းအင်တိုးလာစေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Lemon မှာ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသလို ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလည်းရှိတဲ့အတွက် သဘာဝ Antioxidant အဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ပျားရည်၊ ရေနွေးနွေးနဲ့ Lemon ကိုရောနှောပြီး လည်ချောင်းနာတဲ့အခါမှာ ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ Lemon မှာ ချွဲတွေကိုလျော့ကျစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ ပူနွေးတဲ့ Lemon အရည်က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနဲ့ သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Use lemons to treat throat infections
Lemon က ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို မြှင့်တင့်ပေးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေတယ်
Lemon မှာ အမြောက်အမြားပါဝင်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်က ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို မြှင့်တင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Lemon ကို ပုံမှန်လေးစားသုံးပေးရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေပြီး ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ် နှေးကွေးလာမှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါအပြင် တစ်နေ့တာလုံးခွန်းအားတွေ ပြည့်နေပြီး ပျော်ရွှင်တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေမှာပါ။ Lemon ကို အစားအစာတွေနဲ့ ဖျော်ရည်တွေမှာ ထည့်သွင်းသောက်သုံးခြင်းက ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် ဖျားနာခြင်းတွေကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
They boost brain function and reduce stress
Lemon ဖျော်ရည်က နေလောင်တာ သက်သာစေတယ်
နေလောင်တာက တော်တော်နဲ့မသက်သာနိုင်သလို အလွန်ကြည့်ရဆိုးတဲ့ အရေပြားပြဿ
နာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း နေလောင်ခြင်းကြောင့် နီမြန်းခြင်းနဲ့ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ကုသနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ Lemon ကိုအသုံးပြုပြီး ကုသခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lemon စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ Rose Water၊ သခွားသီးရည်တို့ကို ရောနှောပြီး ရလာတဲ့အရောအနှောမှာ အဝတ်စတစ်ခုကို နှစ်ပြီး နေလောင်တဲ့အပေါ်မှာ အုပ်ကာ ၃၀ မိနစ်လောက်ထားပေးပါ။သခွားသီးနဲ့ Lemon မှာ အစွန်းချွတ်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့အတွက် နေလောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားရေနီမြန်းခြင်းကို လျော့ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Lemon မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီက အရေပြားအစက်အပြောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ အရေပြားပျက်စီးခြင်းတွေကို လျော့နည်းသက်သာသွားအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Lemon နဲ့ နေလောင်တာကို ကုသမှုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာမျိူးကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
Lemon juice can ease the agony ofasunburn.
Lemon က ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို မှေးမှိန်စေပါတယ်
Lemon မှာ ဗီတာမင်စီနဲ့ Citric Acid တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ဝက်ခြံနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွက်တွေကို ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ကော်လဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင့်ပေးပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့ပြောင်တင်းစေပါတယ်။ ဒါအပြင် အရေပြားဆဲလ်အသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လည်း အားပေးကူညီပေးပါတယ်။ Lemon အရည်နဲ့ သန့်စင်တဲ့အုန်းဆီကိုရောနှောပြီး ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကို အမာရွတ်ရှိတဲ့နေရာအပေါ် ဝါဂွမ်းလေးနဲ့ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ သုတ်လိမ်းပြီးနောက် သုံးမိနစ်လောက်ထားပေးကာ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ဆေးကာ အစိုဓာတ်ခရင်မ် ပြန်လိမ်းပေးပါ။ Lemon အရည်ကို Almond Oil နဲ့လည်းပေါင်းစပ်ပြီး အမဲစက်တွေလျော့နည်းအောင်နဲ့ ကျန်းမာတဲ့အသားရေရရှိအောင် ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အသားရေကနီမြန်းပြီး ယားယံနေတယ်ဆိုရင်တော့ Lemon ဖျော်ရည်ကို အသားအရေပေါ်မလိမ်းသင့်ပါဘူး။
Lemons are good for fading acne scars
ဒါတွေကတော့ Lemon နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ကော အလှအပရေးရာဘက်မှာပါ အသုံးဝင်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးသိတဲ့ Lemon ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အခြားအချက်တွေရှိရင်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားပါအုံးနော်။
Lemon တဈမြိုးတညျးနဲ့ စှယျစုံသုံးကွမယျ
Lemon ကို လူအမြားစုက အမူးအမျောပွဖေို့ ဖြျောသောကျတတျကွသလို ဟငျးအမယျတှမှော အခဉျြဓာတျရရှိဖို့အတှကျလညျး အသုံးပွုတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Lemon က အခဉျြဓာတျအပွငျ လူတှထေငျထားတာထကျကို အကြိုးကြေးဇူးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ ကငျဆာရောဂါကို ခုခံကာကှယျနိုငျတဲ့အပွငျ မကျြနှာပျေါရှိ အမာရှတျတှပေါပြောကျကငျးအောငျ ကုသနိုငျတဲ့အထိ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကသာမက အလှအပရေးရာအထိပါ အကြိုးကြေးဇူးတှေ အလှနျပေါမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဈေးလညျးမကွီးသလို အလှယျတကူဝယျလို့ရနိုငျတဲ့ Lemon ကိုသုံးပွီး အလှအပနဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘယျလိုအကြိုးရှိအောငျ အသုံးပွုရမလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတတိုးစဖေို့အတှကျ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
Lemon မှာ ကငျဆာကိုဆနျ့ကငျြနိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှမြေားစှာရှိပါတယျ
တခွားသော လတျဆတျတဲ့ အသီးတှလေို Lemon မှာလညျး ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားခွငျးကို တားဆီးကာကှယျနိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှမြေားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ ခဉျြတဲ့အရသာရှိတဲ့ အသီးတှနေဲ့ အဲ့အသီးတှကေနေ ထုတျယူရရှိတဲ့ အဆီတှကေ ကငျဆာရောဂါကို တားဆီးကာကှယျပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျတှကွှေယျဝစှာပါဝငျတဲ့ Lemon ဖြျောရညျက သစေနေိုငျလောကျတဲ့အထိ ဖြားနာစနေိုငျတဲ့ ဆဲလျတှဖွေဈပျေါလာခွငျးကို တားဆီးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ Lemon မှာ ဗီတာမငျစီ၊ ကယျဆီယမျ၊ သံဓာတျ၊ မဂ်ဂငျနီဆီယမျ၊ ပိုတကျဆီယမျနဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။ Lemon မှာပါဝငျတဲ့ ဟိုကျဒရိုကာဗှနျဒွပျပေါငျးက ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားခွငျးကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှရှေိပါတယျ။ဒါ့အပွငျ Lemon က သားမွတျကငျဆာ၊ အသညျးကငျဆာ၊ အဆုတျကငျဆာနဲ့ တခွားသောကငျဆာရောဂါတှေ မဖွဈပှားအောငျ ကာကှယျနိုငျစှမျး ရှိတယျလို့လညျး လလေ့ာမှုတှအေရ ဖျောပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ Lemon က အကောငျးဆုံး သဘာဝကငျဆာတိုကျဖကျြရေး မီးဖိုခြောငျသုံးဆေးဖကျဝငျပစ်စညျးတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
Lemon သုံးပွီး အရေးအကွောငျးတှကေို သဘာဝအတိုငျးဖယျရှားမယျ
အသကျအရှယျကွီးရငျ့လာလို့ အရေးအကွောငျးတှဖွေဈပျေါလာတာကို ဟနျ့တားလို့မရပမေယျ့လညျး Lemon သုံးပွီး အရေးအကွောငျးတှေ နညျးနိုငျသမြှ နညျးအောငျနဲ့ မကျြနှာအရပွေားကို သိသိသာသာတိုးတကျကောငျးမှနျလာအောငျ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ Lemon အဆီအနှဈက မကျြနှာအရပွေားပျေါရှိ ဆဲလျတှပေကျြစီးမှု လြော့ကသြှားအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျစီကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကောလဂငျြထုတျလုပျမှုကို အားပေးပွီး အရပွေားရဲ့ ကြုံနိုငျဆနျ့နိုငျစှမျးအားကိုလညျး နဂိုတိုငျးပွနျဖွဈလာအောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။ Lemon ဖြျောရညျမှာ ပါဝငျတဲ့ သဘာဝ Enzyme ဓာတျက အရပွေားရှိ ခြှေးပေါကျကယျြနတောကို ပွနျလညျကဉျြးစနေိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိရှိပါတယျ။ ဒါအပွငျ ခြှေးပေါကျကယျြခွငျးတှေ ပွနျလညျမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။ Lemon ကှငျးလေးတှကေို အရေးကွောငျးတှဖွေဈနတေဲ့မကျြနှာပျေါ မိနဈအနညျးငယျတငျပွီး နှိပျနယျပေးခွငျး (သို့မဟုတျ) Lemon ကို အခှံခှာပွီး ခွဈကာ ကပျပေးခွငျးတှေ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။ ဒီလိုလေး ပုံမှနျပွုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ တဈပတျလောကျကွာလာတဲ့အခါမှာ ကလေးအသားအရလေေးလို နူးညံ့လာတာကို အံ့သွဖှယျတှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဝိတျကဖြို့ Lemon ဖြျောရညျသောကျပါ
ဗီတာမငျစီမှာ စိတျဖိစီးမှုဖွဈတဲ့အခါ ထှကျပျေါလာလရှေိ့တဲ့ အလှနျအမငျးစားခငျြစိတျဖွဈစသေော Cortisiol level လြော့နညျးစှာ ပါဝငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အခွားသော Calories နဲ့ သကွားဓာတျတှေ မွငျ့မားစှာပါဝငျတဲ့ ကျောဖီနဲ့ ဖြျောရညျတှကေို သောကျသုံးမယျ့အစား Lemon ကို အကှငျးကှငျးလေးတှလှေီးပွီး ရထေဲမှာစိမျကာ သောကျခွငျးဖွငျ့ ကယျလိုရီတှေ ကဆြငျးစပေါတယျ။ 330ml ရှိတဲ့ CoCa-Cola သံဘူးမှာဆိုရငျ Calories 140 ပါဝငျပွီး ပနျးသီးဖြျောရညျ 100ml မှာဆိုရငျ 46 Calories ပါဝငျကာ Lemon စိမျထားတဲ့ အရညျမှာဆိုရငျတော့ Calories ပါဝငျခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့ ဝိတျကခြငျြတယျဆိုရငျတော့ အခွားဖြျောရညျတှသေောကျသုံးမယျ့အစား အလှယျတကူရနိုငျတဲ့ Lemon ဖြျောရညျကိုသာ သောကျသုံးဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
Lemon ဖြျောရညျက အသညျးအဆိပျအတောကျပွစေနေိုငျတယျ
Lemon ဖြျောရညျသောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျ အဆိပျအတောကျတှပွေစေပွေီး အစာခဖြေကျြခွငျးလုပျငနျးစဉျကိုလညျး တိုးတကျကောငျးမှနျလာစပေါတယျ။ Lemon မှာပါဝငျတဲ့ Pectin ဓာတျက အဆီတှကေို ခြှဲပဈြစပွေီး အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။ Lecithin ထဲမှာပါဝငျတဲ့ Choline နဲ့ အခဉျြဓာတျမှာပါဝငျတဲ့ အဆီဟာ အသညျးထဲမှာရှိတဲ့ အညဈအကွေးတှကေို ဖယျရှားပေးရမှာ ပိုမိုထိရောကျစပေါတယျ။ ဒီလို အကြိုးအာနိသငျမြားပွီး အခဉျြဓာတျကွှယျဝတဲ့ Lemon ကို အသညျးအဆိပျအတောကျတှပွေစေဖေို့ အိမျမှာ ဒီလိုလေးပွုလုပျပွီး သောကျသုံးလို့ရပါတယျ။ လုပျပုံလုပျနညျးလေးကတော့ Lemon တဈလုံး၊ ရခှေကျတဈဝကျ၊Lecithin စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး(သို့) ကွကျဥအစိမျးတဈလုံး၊ အုနျးဆီနှဈဇှနျးမှသုံးဇှနျး(သို့) သံလှငျဆီနှဈဇှနျးမှသုံးဇှနျး၊ ဗီတာမငျအီးတဈတောငျ့နဲ့ လတျဆကျတဲ့ဂငျြးတဈတောငျ့ တို့ကိုရောပွီး တဈမိနဈခနျ့ထားပေးပါ။ ရလာတဲ့အရောအနှောကို ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာထားပေးပွီး နောကျနမှေ့ာ သောကျသုံးပေးလို့ရပါတယျ။ ဒီအရောအနှောကိုသောကျသုံးမယျဆိုရငျ ထမငျးမစားခငျ ဇှနျးတဈဝကျခနျ့သောကျသုံးပေးတာက ကောငျးမှနျတဲ့ အကြိုးရလဒျကို ရရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
Lemon သုံးပွီး အသကျရှုလမျးကွောငျးကူးစကျရောဂါကို ကုသလို့ရပါတယျ
Lemon မှာ စှမျးအငျတိုးလာစဖေို့အတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ဒါအပွငျ Lemon မှာ ဗီတာမငျစီကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျ ကိုယျခံစှမျးအားကိုတိုးတကျကောငျးမှနျလာစသေလို ပိုးမှားတှကေိုသစေနေိုငျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိလညျးရှိတဲ့အတှကျ သဘာဝ Antioxidant အဖွဈလညျး အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ ပြားရညျ၊ ရနှေေးနှေးနဲ့ Lemon ကိုရောနှောပွီး လညျခြောငျးနာတဲ့အခါမှာ ဆေးအဖွဈအသုံးပွုပေးလို့ ရပါတယျ။ Lemon မှာ ခြှဲတှကေိုလြော့ကစြတေဲ့ ဂုဏျသတ်တိရှိပါတယျ။ ပူနှေးတဲ့ Lemon အရညျက ဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုနဲ့ သူရဲ့နောကျဆကျတှဲ ရောဂါလက်ခဏာမြားကို ဖယျရှားပဈရနျ အထိရောကျဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
Lemon က ဦးနှောကျလုပျငနျးဆောငျတာကို မွှငျ့တငျ့ပေးပွီး စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ကစြတေယျ
Lemon မှာ အမွောကျအမွားပါဝငျတဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျက ဦးနှောကျလုပျငနျးဆောငျတာကို မွှငျ့တငျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ Lemon ကို ပုံမှနျလေးစားသုံးပေးရငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာခံစားမှုတှေ တိုးတကျကောငျးမှနျလာစပွေီး ဦးနှောကျလုပျငနျးစဉျ နှေးကှေးလာမှုကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။ ဒါအပွငျ တဈနတေ့ာလုံးခှနျးအားတှေ ပွညျ့နပွေီး ပြျောရှငျတကျကွှလနျးဆနျးနစေမှောပါ။ Lemon ကို အစားအစာတှနေဲ့ ဖြျောရညျတှမှော ထညျ့သှငျးသောကျသုံးခွငျးက ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲကွောငျ့ ဖြားနာခွငျးတှကေိုလညျး သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
Lemon ဖြျောရညျက နလေောငျတာ သကျသာစတေယျ
နလေောငျတာက တျောတျောနဲ့မသကျသာနိုငျသလို အလှနျကွညျ့ရဆိုးတဲ့ အရပွေားပွဿ
နာလညျးဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး နလေောငျခွငျးကွောငျ့ နီမွနျးခွငျးနဲ့ စပျဖငျြးဖငျြးဖွဈခွငျးကို ထိထိရောကျရောကျနဲ့ ကုသနိုငျမယျ့ အိမျတှငျးနညျးလမျးတဈခုကတော့ Lemon ကိုအသုံးပွုပွီး ကုသခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ Lemon စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး၊ Rose Water၊ သခှားသီးရညျတို့ကို ရောနှောပွီး ရလာတဲ့အရောအနှောမှာ အဝတျစတဈခုကို နှဈပွီး နလေောငျတဲ့အပျေါမှာ အုပျကာ ၃၀ မိနဈလောကျထားပေးပါ။သခှားသီးနဲ့ Lemon မှာ အစှနျးခြှတျတဲ့ ဂုဏျသတ်တိရှိတဲ့အတှကျ နလေောငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အသားရနေီမွနျးခွငျးကို လြော့ကသြှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါအပွငျ Lemon မှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျစီက အရပွေားအစကျအပွောကျဖွဈခွငျးနဲ့ အရပွေားပကျြစီးခွငျးတှကေို လြော့နညျးသကျသာသှားအောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။ Lemon နဲ့ နလေောငျတာကို ကုသမှုပွုလုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ နရေောငျခွညျတိုကျရိုကျထိတှတေ့ာမြိူးကို ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
Lemon က ဝကျခွံအမာရှတျတှကေို မှေးမှိနျစပေါတယျ
Lemon မှာ ဗီတာမငျစီနဲ့ Citric Acid တှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အတှကျ ဝကျခွံနဲ့ ဝကျခွံအမာရှကျတှကေို ထိရောကျစှာ ကုသနိုငျပါတယျ။ ဗီတာမငျစီက ကျောလဂငျြထုတျလုပျမှုကို မွှငျ့တငျ့ပေးပွီး အသားအရကေို ခြောမှပွေ့ောငျတငျးစပေါတယျ။ ဒါအပွငျ အရပွေားဆဲလျအသဈတှဖွေဈပျေါလာအောငျလညျး အားပေးကူညီပေးပါတယျ။ Lemon အရညျနဲ့ သနျ့စငျတဲ့အုနျးဆီကိုရောနှောပွီး ရရှိလာတဲ့အရောအနှောကို အမာရှတျရှိတဲ့နရောအပျေါ ဝါဂှမျးလေးနဲ့ သုတျလိမျးပေးပါ။ သုတျလိမျးပွီးနောကျ သုံးမိနဈလောကျထားပေးကာ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ပွနျဆေးကာ အစိုဓာတျခရငျမျ ပွနျလိမျးပေးပါ။ Lemon အရညျကို Almond Oil နဲ့လညျးပေါငျးစပျပွီး အမဲစကျတှလြေော့နညျးအောငျနဲ့ ကနျြးမာတဲ့အသားရရေရှိအောငျ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။ အသားရကေနီမွနျးပွီး ယားယံနတေယျဆိုရငျတော့ Lemon ဖြျောရညျကို အသားအရပေျေါမလိမျးသငျ့ပါဘူး။
ဒါတှကေတော့ Lemon နဲ့ပတျသကျပွီး ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့အနနေဲ့ကော အလှအပရေးရာဘကျမှာပါ အသုံးဝငျတဲ့ အခကျြလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးသိတဲ့ Lemon ရဲ့ အသုံးဝငျတဲ့ အခွားအခကျြတှရှေိရငျလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးသှားပါအုံးနျော။